Maayir Soltelco Muxuu Kala Kulmay Booqashadiisii Bandhigga 12-aad ee Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa 2019?+ SAWIRRO | Gabiley News Online
July 23, 2019 - Written by admin
Hargeysa,(HargeisaPress) —Duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco), ayaa sheegay inuu wax cajiib ah ku arkay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa oo uu maalintii afraad ka socdo Bandhigga caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa, oo uu gelinkii hore ee maanta kormeeray, isla markaana uu ku arkay buugaag badan oo dhalinyaro Wiilal iyo Gabdho isugu jira oo reer Somaliland u badani qoreen iyo astaamaha aataaro qadiimi ah.
Maayer Soltolco oo ay weheliyeen Ku-xigeenkiisa Cabdicasiis Cagawayne, Xildhibaanno iyo Xubno kale, waxa uu sheegay inaanu filayn heerka qoraalka buugaagta dhalinyaradu inuu gaadhay halkan uu hadda marayo ee uu saaka ku arkay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa oo Boqollaal Buug oo cusub lagu soo bandhigay sannadkan 2019-ka oo Bandhigga Buugaagta Hargeysa ee xaruntani qaban-qaabisaa 12-jirsaday.
“Waxaannu saaka soo booqannay xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo uu ka socdo Dabbaal-degga toddobaadka Bandhigga Buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa, runtii shaqo fiican baa ka socota, Jaamac iyo Safiir Ayaan waxaan u rejaynayaa guul iyo gobannimo, wax badan oo ka maqnaa dhaqanka ayey ku soo kordhiyeen, goobihii taariikhda oo sidaannu arkaynay la xiftiyey ayaa ka mid ah, waxaan leeyahay sidaa aad ugu dedaasheen dalkiinna iyo taariikhdiisa, ayaannu idiin rejaynaynaa inaad idinkuna guul ku gaadhaan.”
Duqa caasimadda Md. Cabdiraxmaan-Soltelco, oo la weydiiyey, waxyaabaha sida gaarka ah u soo jiitay intii uu ku guda-jiray kormeerka Bandhigga Buugaagta, waxa uu ku jawaabay; “Waxaan ku arkay oo runtii aad ii soo jiitay sida dhalinyarada reer Somaliland ugu dedaaleen inay buugaag qoraan, waayo maan filayn in dhalinyaradeennu sidan ku yihiin qoraalka oo ay buugaagta sidan u badan dhalinyaradu qoreen, waana wax wanaagsan oo lagu farxo, annaguna maamul dowlad hoose ahaan, waannu dhiirrigelinaynaa, waxaannu ku dedaalaynaa inaannu gacan qabanno dhalinyarada hal-abuurka iyo curinta buug qorista leh.”
Sidoo kale, mar uu ka jawaabayey Maayer Soltelco, goobaha taariikhiga ah ee astaamohooda la xafiday lagu soo bandhigay Xarunta dhaqanka inaanay Hargeysa ku jirin, sidaa darteed inay u qorshaysantay inay sannadaha soo socda ku soo bandhigaan Hargeysa taariikhdeeda iyo waxa astaanta u ah, waxa uu yidhi; “Haa Hargeysa kumay jirin, waayo, magaalooyinka taariikhiga ahi way ka fac weyn yihiin Hargeysa oo Hargeysa oo aan jirin amma tuulo ah, ayey jireen Saylac, Taleex iyo goobaha kale ee qadiimka ah. Markaa, caasimadda Hargeysa waxaa farxad u ah inay nasiib u hesho in lagu soo bandhigo taariikhdaa dalkeennu leeyahay.”
Bandhigga caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa, ayaa maanta maraya maalintiisii afraad, ka dib markii uu sabtidii si rasmi ah uga furmay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa oo sannad kasta soo qaban-qaabisa Bandhiggan. Bandhigga sannadkan oo ah kii 12-aad, ayey ka soo qaybgaleen 93 Ergay oo ka kala socday 23 waddan oo dunida ah oo isugu jiray Suxufiyiin, Safiirro, Siyaasiyiin, Diblamaasiyiin, Qorayaal, Jilayaal, Abwaanno, Hal-abuur, Mudan iyo Marti-sharaf kale, iyadoo intaa uu socday lagu soo bandhigay buugaag badan oo kala duwan oo ay qoreen Qorayaal heer caalami ah oo luuqado kala duwan ku qoran iyo kuwo ay qoreen qorayaal dhalinyaro iyo waayeelba leh oo reer Somaliland ah, Gabayo, Suugaan iyo Sheekooyin la curiyey-ba, doodo iyo daliillo dhiirrigelin ah. Waxaa xusid mudan, Gabayada iyo Suugaanta kale ee lagu soo bandhigay xarunta dhaqanka inay qayb ka ahaayeen in Gabadho dhalinyaro Hal-abuur ahi ay ku soo bandhigeen Carwadan Gabayo iyo Maansooyin ay ku turiyeen luuqadda Ingiriisida.
Buugaagta lagu soo bandhigay ee nasiibka u yeeshay in qorayaashoodu ay faahfaahin ka bixiyaan, waxaa ka mid ah Cabdalla Xaaji oo sharraxay Buuggiisa Fanka iyo Fannaaniinta Jabuuti, Buugga “Qaran iyo Qabiil laba aan is-qaban” oo uu qoray Rashiid Xaaji Cabdillaahi (Rashiid-Gadhwayne), Buug uu qoray Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, Mawliid Biixi. Geesta kale, Caasha Axmed, Farax Ayaanle Dayax-weerar, ayaa iyagu soo bandhigay Suugaan ay Luuqadda Ingiriisida ku tiriyeen, Deeqa Xasan, ayaa iyaduna Gabayo ay afka Hooyo ku tirisay halkaas ka jeedisay. Lama koobi karo Sugaanyahannada Suugaantooda ku soo bandhigay iyo weliba Qorayaasha Buugaagta ay qoreen soo bandhigay, laakiin intaas ayeynu ka xusnay, kuwo badan oo kalena waa la soo bandhigayaa illaa khamiista oo Bandhiggu soo xidhimi doono ka hor. Cabdixakiin Maxamuud Maxamed Ubaxle, oo ku guulaystay Bandhiggii sannadkii 2018-ka tartanka Sheeko Curinta toolmoon ee Sheeko iyo Shaahid, isla markaana sheekadii uu ku guulaystay oo la baxday “Hayaan” iyadoo Buug ah ku soo bandhigay Bandhiggan caalamiga ah ee 12-aad ee Buugaagta Hargeysa, waxaana halkaas lagu guddoonsiiyey Shahaado, isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guushiisa.